आज चन्द्र ग्रहणः कुन राशी भएकाले के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन ? आज वर्षौंपछिको दुर्लभ खगोलीय घटना | हुलाकी अनलाइन
आज चन्द्र ग्रहणः कुन राशी भएकाले के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन ? आज वर्षौंपछिको दुर्लभ खगोलीय घटना
Posted By: Hulaki Onlineon: In: Breaking, headline, hindu3 Comments
माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन आज बेलुकी खग्रास चन्द्रग्रहण लाग्ने भएको छ । नेपाल पञ्चांग निर्णायक समिति अनुसार, बेलुकी ५ बजेर ५५ मिनेटमा चन्द्रमा उदाउने र बेलुकी ६ बजेर ३६ मिनेटमा इशान कोणबाट ग्रहणले छुनेछ ।
चन्द्रग्रहण अफ्रिकाका केही देशबाहेक विश्वभरबाट देख्न सकिने सोसाइटीले जनाएको छ । आधुनिक विज्ञानअनुसार चन्द्रग्रहण हेर्न टेलिस्कोप अथवा अन्य कुनै यन्त्रको सहयोग लिनुपर्दैन । खुला आँखाले पनि हेर्न सकिन्छ । जुनसुकै राशि भएकाहरुले पनि चन्द्रग्रहण हेर्दा वैज्ञानिक आधारमा केही असर नपर्ने सोसाइटीका अध्यक्ष भट्टराईको मत छ । २०७४ माघ १७